राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ, तर जवाफदेहिता बिनाको अराजक स्वायत्तता भने होइनः अर्थमन्त्री खतिवडा – Clickmandu
राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ, तर जवाफदेहिता बिनाको अराजक स्वायत्तता भने होइनः अर्थमन्त्री खतिवडा
क्लिकमान्डु २०७६ असार २३ गते १२:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्थाको रुपमा अघि बढनु पर्ने बताएका छन् । स्वायत्ततालाई केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अभिभावकत्व लिने क्षमताको विकास गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिए ।
‘स्वायत्तता सँगसँगै जवाफादेहिताका कुराहरु आउँछन, जवाफदेहिता बिनाको स्वायत्तता अराजकता हुन्छ, हामीले जवाफादेहिता देशका सम्पूर्ण नागरिकमा राख्नुपर्छ, त्यही अनुरुपमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जवाफदेहिता अघि बढाउने छ,’ राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालयको शिल्यानाश गर्दै पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।
‘त्यो स्वायत्ततालाई प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय प्रणालीको अभिभावकत्व पनि ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणाली बैंकिङ प्रणालीको आधिपत्य भएको प्रणाली भएको र बैंकिङ प्रणाली ठिक नभएको खण्डमा बीमा, धितो, सहकारी लगायत वित्तीय कारोबार हुने प्रणालीमा प्रतिकुल असर पर्नसक्ने मन्त्रीको भनाई छ ।
अहिले सरकारले देशको आर्थिक पुननिर्माणको क्रममा रहेको भन्दै त्यसको लागि संघीय अनुरुपको वित्तीय प्रणाली, आर्थिक प्रणाली र प्रशासकिय प्रूणालीको पुननिर्माण भएको उनको तर्क छ ।
‘यो पुननिर्माण गर्ने क्रममा केही समय लागेकै हो, हाम्रो आर्थिक पुननिर्माणको जग भनेको कानून निर्माण, वित्तीय कार्यविधि, लेखा परीक्षण, समग्र कार्यविधि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । वित्तीय रुपमा हामीले पुनिर्माण गर्नुपर्ने विषयमा हिजो आर्थिक वृदिले मात्र सन्तुष्ट हुने समाजलाई हामीले सामाजिक न्यायसहितको वितरण लगायतका नागरिकले पाउने अधिकारको काम अघि बढेको छ ।’ उनले भने ।
सरकारले स्थानीय तहमा पनि नगदमा आधारित कारोबार प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने र त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा दुई वटा सरकारी बैंकलाई पूर्ण रुपमा स्वस्थ बनाउन सकेको तर्क गरे । यो एक वर्षको अवधिमा सरकारी र निजी क्षेत्रको बैंक प्रतिस्पर्धामा आउन सकेको धारणा राखे ।
नेपालमा अब लगानीमात्र नभएर लगानीको प्रतिफल दर पनि बढाउने बेला भएको बताए । त्यसको लागि वित्तीय बजारमा हुने वित्तीय साधान उत्पादनमा परिचालिन हुनुपर्ने बताए । त्यसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा सोचेजति विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आउन नसकेको ब्यापा घाटा सन्तुलनमा आउन सकेको बताए ।
‘यसको लागि आगामी आवको मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा बाह्य क्षेत्र स्थायीत्व, भुक्तानी सन्तुलत सहज स्थितीमा पुग्ने गरी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा झण्डै ३० वर्ष आफुले बिताएको स्मरण गरेर ।मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि पुननिर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।
‘पुननिर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले कुनै समयमा उल्टोबाटो नी हिँडेको हो कि भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जग बलियो भयो भने संरचना पनि बलियो हुन्छ,’ खतिवडाले भने ।
पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा १६ अर्ब १७ करोड, तीन बैंक ३ महिनामा अर्बपति
धितोपत्र बोर्डका कार्यबाहक अध्यक्षको खुलासाः सेयर बजारमा भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार
सुजुकीको एस-प्रेसो नेपालमा सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
व्यक्तिगततर्फ लगातार ६ वर्षसम्म बढी आयकर तिर्ने व्यक्ति बने सिद्धार्थ राणा